Noobs ကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေတာလား | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 22, 2008 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
နည်းပညာအရစွဲလမ်းမှု၊ နားလည်မှုရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအနက်မှတစ်ခုမှာ (အခြားသူများသည်) အမြဲတမ်းသင့်အားအကူအညီတောင်းခံရန်ဖြစ်သည်။ ငါ့သူငယ်ချင်းကောင်းနှင့် Hoosier Patric aka မစ္စတာနိုဘီ, သင်၏ပခုံးကိုချွတ်ဒီဝန်ယူအပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားသည်! Patric သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၀ က်ဘ်ဆိုက် Noobie တွင်ကြီးထွားလာခဲ့သော်လည်းအသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်စတင်ခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။
Noobie, Inc. တွင်ဝေါဟာရ၊ အသံနှင့်ဗွီဒီယို podcasts များ၊ ဆောင်းပါးများနှင့်အဖြစ်အပျက်များပင်ရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုအစဉ်အဆက်တွေးမိ iPhone နှင့် iPod Touch အကြားခြားနားချက်များ လား Noobie, Inc သည်အဖြေရှိသည်!
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ကိုရောင်းပြီး“ Helping Hand” ဆိုသည့် site တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီနည်းပညာကိုထောင့်ကနေပစ်ချလိုက်တာကဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကူညီတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။ Noobie, Inc သည်ကျွန်ုပ်ကူညီခြင်းလက်ဖြစ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ Patric မှဂုဏ်ယူပါတယ်!
သင်ဤ post ကိုမထားမှီ - သင့်မိဘများ၊ ညီအစ်ကိုများ၊ ညီအစ်မများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလင့်ခ်တစ်ခုသို့အီးမေးလ်ပို့ပါ Noobie, Inc မှ။ သင်သည်လည်းစာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ် Noo ဘလော့ဆိုတာဘာလဲ!
Patric သည်သင်၏ဘ ၀ ၌ကလေးငယ်များအားဂရုစိုက်ပါစေ။
Tags: infographics သတင်းရင်းမြစ်မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက်လုံခြုံတဲ့စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်မိမိဘာသာပြုလုပ်ရန်ကို virtual လက်ထောက်နည်းပြဝက်ဘ်ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှု
မေလ 23, 2008 မှာ 3: 35 pm တွင်
မေလ 23, 2008 မှာ 3: 43 pm တွင်
အလွန်ကြီးစွာသောရည်ညွှန်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မည်သူမဆိုအတွက်ကောင်းမွန်သော site တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ယူမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောနည်းပညာအသစ်သည်အမြဲတမ်းလာနေသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။